အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းအား ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတွေ့ဆုံ | Moep1's Blog
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းအား ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတွေ့ဆုံ
(နေပြည်တော် သြဂုတ် ၂၇၊၂၀၀၉)
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Chu Chong Phungသည် သြဂုတ် ၂၆ရက် ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမသို့ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ယင်းနောက် ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား EGAT International Company Limited မှ Acting Managing Director Mr. Prutichai Chonglertvanichkul? Sinohydro (Thailand) Co.,Ltd မှ Managing Director Mr. Zhang Lei နှင့်အဖွဲ့တို့ ဆက်လက်တွေ့ဆုံကြပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံကြရာတွင် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်၊ ၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများနှင့် လုပ်ငန်းတို့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
This entry was posted on Thursday, August 27th, 2009 at 11:31 am and is filed under အထွေထွေ (General News).	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.